EsobuNdunankulu eSweden sesiqhoqhobelwe obehoxisiwe - Bayede News
UMnu uStefan Lofven / Isithombe: Reuters
Uqhekeko phakathi kwe-UAE neSaudi Arabia
Ukhuze ibuya emuva kweviki esulile uNdunankulu waseSweden. Umholi weqembu iSweden Social Democrat uMnu uStefan Lofven uphinde waqokelwa esikhundleni sokuba nguNdunankulu yiPhalamende ngoLwesithathu.
Ngesonto eledlule lo mholi ulahlwe ivoti lokungamethembi ubuholi bakhe. Emuva kwalokhu kuchithwa ngamalungu ePhalamende wabe esenikezwa iviki ukuthi asule kwesobuNdunankulu aphinde adlulisele amandla ombuso kuSomlomo u-Andreas Norlén okumele ayalele amalungu ePhalamende ukuthi akhethe omunye uNdunankulu okanye abize ukhetho kube ngabantu abaziqokelayo umholi wabo.
USomlomo waqoka ukuthi kube ngamalungu ePhalamende akhetha ubuholi obusha wangalubiza ukhetho lukazwelonke ngenxa yokwesabela ukubhebhetheka kokhuvethe. Iqembu lakhe uLofven liphinde laqoka yena njengelifuna ukuthi abuyele kwesobuNdunankulu.
Kumalungu angama-379 angama-175 avotele ukuthi abuye lo mholi kulesi sikhundla. Kube nguye ohamba phambili ngokwamavoti eshiya imbangi ebiseduze ngamavoti amabili. Lokhu kubuyiselwa kwakhe kwesobuNdunankulu kwenzeke ngoLwesithathu.
Emuva kokudla lo mhlanganiso ube esebamba isithangami nabezindaba kusona akathe; “IRiksdag (okuyiPhalamende laseSweden) inginike ukwesekwa engikudingayo ukuze ngiqhubeke nokuhola iSweden”.
UMnu ULofven phambilini washiya isikhundla sakhe ngemuva kokulahlekelwa yivoti lomlando lokungazethembi ubuholi bakhe zingama-21 kuNhlangulana elabizwa iqembu eliphikisayo iSweden Democrats.
Lesi sinyathelo saphumelela ngoba iqembu ebelingumlingani weqembu lakhe iLeft Party ikuhoxisile ukweseka kwakhe uHulumeni wobumbano wangaphambilini kaMnu uLofven neqembu iGreens imbangela okwakungumthetho ohlongozwayo wokubhekana nokushoda kwezindlu.
UMnu uLofven ukhuza ibuya nje yingoba ngesikhathi uSomlomo uNorlen ekhetha ukubiza ukhetho lwangaphakathi ePhalamende kunolukazwelonke waqale wanikeza umholi weqembu eliphikisayo iModerates uMnu u-Ulf Kristersson igunya lokwakha uHulumeni omusha.
Wehluleka wancama uMnu uKristersson ukukwenza lokhu njengoba engakwazanga ukuthola amalungu ePhalamende angama-174 ukuthi aseke ukuqokwa kwakhe. Lokhu kwabe sekuvulela indlela uMnu uLofven ukuthi akhuze ibuya.
Ngemuva kwevoti langoLwesithathu, uMnu uKristersson wathi ukunqoba kukaLofven bekungalindelekile futhi kuyishwa. Nakuba ebuyele kulesi sikhundla kodwa akucaci ukuthi uzohlala isikhathi esingakanani. Ukuhlehlelwa kwakhe iLeft Party yikho okufikisa ungabazane ukuthi uzohlala isikhathi eside kanti kuyazeka ukuthi namanye amaqembu awahambisani nobuholi bakhe.
Ukuzama ukuheha amanye amaqembu nokwakha isisekelo uthe ngonamuhla uzomemezela iKhabhinethi elisha elizofaka amalungu amanye amaqembu nakuba lizoqukatha kakhulu labo beGreens neSweden Democrats.
Okuze kube manje njengoba esekhuze ibuya uMnu uLofven akakatholi ukuxhaswa okwanele ukuphasisa isabelomali kanti ngalokhu uthe uma le nkinga iqhubeka uzokwesula.
Ngalokhu uthe; “Ngingowokuqala ukuvuma ukuthi lokhu ngeke kube lula. Kodwa futhi ngingowokuqala ukuthi manje sonke kufanele sizinikele. Akekho umuntu ongathola yonke into, kodwa wonke umuntu angathola okuthile”.
Uma ehluleka ukuyilungisa le nkinga uLofven kulindeleke ukuthi uSomlomo wephalamende aphoqeleke ukuthi asondeze ukhetho lukazwelonke ebekumele lube ngoMandulo ngonyaka ozayo.
Inkinga enkulu akabhekene nayo njengamanje uLofven ukuthi kuzomele athembele kakhulu kumholi weLeft Party uMnu uNooshi Dadgostar kanti lomholi uyaphikisana nohlelo lwakhe lokulawula izimakethe zezindlu okuyikho okugcine sekumlahlekisela ngesikhundla lo mholi emveni kokuthi uMnu uDadgostar ehoxise ukumeseka kwakhe ePhalamende.
nguNtobeko Shozi Jul 9, 2021